Epistily voalohany ho an'i Timoty - Wikipedia
Epistily voalohany ho an'i Timoty
Ny Epistily voalohany ho an'i Timôty na Epistola voalohany nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Timôte na Taratasy voalohany nosoratan'i Masindahy Paoly ho an'i Timôte dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Ato amin’ity taratasy ity no anantitranteran’i Paoly ny amin’ny famonjena azo avy amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy. Ampianariny ny fitodran-tena anjakan’ny fanaovana asa tsara. Ambarany koa fa tokony ho olona mendrika halain-tahaka ny mpitandrina sy ny loholona misahana andraikitra ary ny diakona na diakra. Tian’i Paoly raha manaraka ny lalana tena izy ny fitantanana ny fiangonana. Noho izany dia tokony tsy avela hanjaka ny fahadisoan’ireo milaza tena ho manam-pahaizana momba ny Lalàna; tokony hosakanana koa ny fianteherana amin’ny angano (na fedrà) sy amin’ny tetiarana namboamboarina ary amin’ny fadifady ara-tsakafo isan-karazany.
Ity epistily ity dia ahafahana mamantatra bebe kokoa ny tokony ho rafitry ny fiangonana kristiana isan-toerana: ahitana mpitarika ao am-piangonana ary misy fepetra fanendrena sy sata mifehy azy ireo. Mibahana ao ny fampianarana satria ilaina ny maneho ny fahamarinana mba hiadiana amin’ny fampianaran-diso izay miely izaitsizy.
Naman'ireo atao hoe Epistily Pastôraly nosoratan' i Paoly io epistily io. Taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty (na Timôte) izany, dia i Timoty izay sady mpianany no mpiara-dia aminy. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 61 sy 65 no nanoratana azy. Misy toko 6 ity boky ity.
2 Fizaràn'ny taratasy
2.1 Teny fiarahabana (1.1-2)
2.2 Fisakanana ny fampianaran-diso (1.3-20)
2.3 Fanarenana ny Fiangonana (2.1 – 6.10)
2.4 Fiandrasana ny ondry (3.1 – 6.10)
2.5 Toromarika manokana ho an’i Timoty (6: 3-21)
Πρώτη Επιστολή προς Τιμόθεο / Prôtê Epistolê pros Timotheo no fiantsoana azy amin'ny teny grika fa Epistula I ad Timotheum kosa amin'ny teny latina.
Teny fiarahabana (1.1-2)Hanova
Fisakanana ny fampianaran-diso (1.3-20)Hanova
Fampitandremana amin’ny fampianaran-diso (1.3-11)
Ny amin’ny fahasoavana (3.12-17)
Ny andraikitr’I Timoty (3.16-20)
Fanarenana ny Fiangonana (2.1 – 6.10)Hanova
Ny amin’ny vavaka (2.1-7)
Ny amin’ny anjara asan’ny lehilahy sy ny vehivavy (2.8-15)
Fiandrasana ny ondry (3.1 – 6.10)Hanova
Ny amin’ny fahaiza-mitarika ao amin’ny Fiangonana (3.1-13)
Tokony harovana ny fahamarinana ao amin’ny Fiangonana (4.1-16)
Ny fomba fitondrana ireo sokajin’olona ao amin’ny Finangonana (5.1- 6.10)
Toromarika manokana ho an’i Timoty (6: 3-21)Hanova
Ny amin’ny fampianaran-diso (6.3-10)
Miady ny ady tsaran’ny finoana (6.11-16)
Teny ho an’ny mpanan-karena (6.17-19)
Fitandremana izay zavatra nankinina amin’ny tena (6.20-21)
Epistily ho an'ny Rômana,
Epistily voalohany ho an'ny Kôrintiana,
Epistily faharoa ho an'ny Kôrintiana,
Epistily ho an'ny Kôlôsiana,
Epistily voalohany ho an'ny Tasalôniana,
Epistily faharoa ho an'ny Tesalôniana,
Epistily voalohany ho an'i Timôty,
Epistily faharoa ho an'i Timôty,
Epistily ho an'i Filemôna
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_voalohany_ho_an%27i_Timoty&oldid=1038772"
Dernière modification le 12 Oktobra 2021, à 10:31
Voaova farany tamin'ny 12 Oktobra 2021 amin'ny 10:31 ity pejy ity.